Guddoonka Golaha Shacabka oo u digay in kabadan 140 Xildhibaan oo katirsan BFS – Kalfadhi
Guddoonka Golaha Shacabka oo u digay in kabadan 140 Xildhibaan oo katirsan BFS
May 7, 2019 May 7, 2019 Kalfadhi
Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay in kabadan 140 Xildhibaan oo Shalay ka baaqday kulanka baarlamaanka.
Guddoomiye Muudeey ayaa sheegay in Xildhibaanada ka maqan madasha oo gaaraya 143 qof ay dhamaantood joogaan magaalada Muqdisho islamarkaana aysan jirin qof ku maqan fasax ama Caafimaad balse ay u maqan yihiin sharci darro loona baahan yahay in lala xisaabtamo.
“Waxaan cadeynayaa in aysan meelna uga qorneen Xeer-hoosaadka iyo dastuurka in fasax la’aan Xildhibaanad iska maqnaadaan” ayuu yiri Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudeey oo la hadlay Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
“Xildhibaanada waxaan u sheegayaa in aysan ku xadgudbin Xeer-hoosaadka baarlamaanka shaqadoodana aysan ka maqnaanin maadama ay saarantahay mas’uuliyad ballaaran” ayuu yiri Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaan Maxamed C/llaahi Nuux oo ah habdhooraha Golaha Shacabka ayaa sheegay in tirada maqan ay yihiin Kooram dhan, maadaama 138 Xildhibaan uu ku furmo fadhiga Golaha Shacabka 143-na ay maqanyihiin. Waxa uu ku tilmaamay nasiib darro aad u wayn loona baahanyahay in laga barto cashar wanaagsan si aysan u soo laaban kulamada dambe.
“Tirada maqan waa Kooram dhan waxayna joogaan magaalada Muqdisho waa nasiib darro iyo arin aad looga xumaado waxaana ku talinayaa in aysan soo laaban” ayuu yiri Xildhibaan Nuux habdhooraha Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Guddoonka Golaha Shacabka ayaa amray in la Aqriyo magacyada Xildhibaanada maqan oo gaaraya 143 Xildhibaan si loo ogeysiiyo Shacabka Soomaaliyeed Xildhibaanada aan waajibkooda dastuuriga ah gudan. Waa markii 2aad oo Xildhibaano ka maqan kulanka baarlamaanka magacyadooda laga yeeriyo fadhiga baarlamaanka tan iyo markii uu xilka qabtay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan.
Xildhibaan Farxiyo Muumin “Waxaan ka xumahay in aan ilaa hadda lagu bixin falkii lagu laayay Carruurta iyo Haweenka ee Gobalka Hiiraan”
Xildhibaan katirsan baarlamaanka Galmudug oo ka walaacsan in Natiijo la’aan ku soo dhamaado Shirka Garowe